यसपाली विहे गर्दै रेखा, को हुन दुलाहा ? भिडियोमा हेर्नुस् - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १७, २०७५ समय: २०:५२:२८
काठमाडौ/ शुक्रबार बाट रिलिज भएको फिल्म ‘मालिका’ले सुरुवाती बाटै दर्शक तान्न सफल भएको छ । आज शनिवार धेरै जसो हल हाउसफुल भएको छ । नारी शशक्तिकरणको लागि बनेको फिल्मलाइ सबै दर्शकले अभियानका रुपमा लिएका छन । आफू पनि मालिका जस्तै बन्छु भन्ने धेरै महिलाको भनाइ थियो । उता रेखा पनि सबै बाट राम्रो प्रतिकृया पाउँदा दङ्ग छिन । तिहारमा अझै दर्शकको भिड लाग्ने रेखा थापाले बताइन ।
उनी भन्छिन “मालिका जस्तो फिल्म बनाउन पाउँदा म निकै नै खुसी छु र मालिकाले समाज रुपान्तरण गर्नेमा पनि विश्वस्त छु ।” उनले थप्दै भनिन “मालिका जस्तो फिल्म न मैले बनाएको थिए न कसैले बनाएको छ । यस्तो फिल्म बनाउन पाउँदा म निकै नै खुसी छु र यसलाइ ब्यापारीक फिल्म भन्दा पनि यसलाइ अभियानका रुपमा लिई दिनु होला ।” यस्तै उनले यसपाली बिवाह गर्ने कुरा पनि खुलाशा गरेकी छिन । पछिल्लो समय बलिउड र कलिउडका नायिकाहरुले बिवाह गर्ने लहर धेरै चलेको छ । कहिले ईङ्गेजमेण्ट पनि गरेका छन् भने केहि चिया गफमा मजाक गरेको पनि हुनसक्छ । अब रेखाको खुलाशा कत्तिको सत्य साबित होला ? हेर्नुस भिडियो ।
हामी संग कुरा गर्दै गर्दा रेखाले ‘मालिका’ संग कुनै पनि फिल्मलाइ दाज्न नमिल्ने र जसले दाज्छ त्यो मुर्खता भएको बताइन । ‘मालिका’ हलमा नचले पनि च्यारीटी मार्फत ७५ ओटै जिल्लामा फिल्म पुर्याउने रेखाले बताइन । बालविवाह र बलात्कारको बिरोधमा बनाइएको फिल्मलाइ सबै बालबालिका, महिला र पुरुषले हेर्ने हो भने यस्ता घटनामा कमि आउने रेखाको बिश्वास छ । त्यसैले ‘मालीका’लाइ सबैले एक पटक हेर्न रेखाको आग्रह पनि छ ।
रेखाले नै निर्देशन गरेको फिल्ममा रेखा र कमला संगै, नर बहादुर कार्की, आर्जु ढुंगाना, किरण थापा, कोपिला थापा लगायतले अभिनय गरेका छन । ‘मालीका’मा सुरेश अधिकारी र एसडी योगीको संगीत ,बनिश शाहको सम्पादन, नर कार्की र रेखा थापाको कथा, शिवम अधिकारीको स्क्रिप्ट रहेको छ । फिल्ममा निर्माताको रुपमा सरस्वति थापा र नर कार्की छन् ।
आँचल शर्मालाई दालभात तरकारी नै मिठो, मह संचारको छोरी भन्दै किरणले यसरि गरे उनको तारिफ (भिडियो सहित)
ईटहरी/ बैशाख २० देखी देश व्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ यतिबेला मोफसल यात्रामा छ । ‘दाल भात तरकार...
ईटहरी/ नेपालमा युट्युबले धेरैको जिन्दगीलाई परिवर्तन गरेको छ । धेरै सेलिब्रेटी भएका छन् भने धेरै दुख पाएकाहरुले भरपुर सहय...
अन्तरबार्तामै ‘समर लभ’ जोडि आशिष र रेवतीको मस्ती (भिडियो सहित)
इटहरी/ उपन्यासकार सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको कथामा निर्माण गरिएको नेपाली चलचित्र समर लभ यही माघ २५ गतेबाट देशभर प्...